Akụkọ Ndụ: Ịbịaru Chineke Nso Dị M Mma
GỤỌ NKE Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Korean Krio Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Ịbịaru Chineke Nso Dị M Mma
M KWỤSỊRỊ ito mgbe m dị afọ itoolu. Anyị bi na Kot Devụa mgbe ahụ. Adị m iri afọ anọ na atọ ugbu a. M sụrụ ezigbo mkpụmkpụ. Adị m amaụkwụ atọ n’ogologo. Mgbe papa m na mama m matara na agaghịzi m eto, ha gwara m ka m rụsiwe ọrụ ike ka otú m dị ghara ịna-echu m ụra. M malitere ire mkpụrụ osisi n’ihu ụlọ anyị, na-edewekwa ebe ahụ ọcha. O mere ka ọtụtụ ndị na-abịa azụ m ahịa.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ịrụsi ọrụ ike agbanweghị ihe ọ bụla. M ka sụrụ mkpụmkpụ. Idewe ihe n’elu tebụl na ime ihe ndị ọzọ na-enweghị ihe ha bụ na-abụrụ m ọgụ na mgba. Ọ dị ka ọ̀ bụ ndị ka m ogologo okpukpu abụọ ka a rụụrụ ihe niile. Ọ dị m ka ọ̀ bụ ụwa nke m kacha njọ. Ma ihe gbanwere mgbe m dị afọ iri na anọ.
Otu ụbọchị, ụmụ nwaanyị abụọ bụ́ Ndịàmà Jehova bịara zụọ m mkpụrụ osisi, malitekwa ịmụrụ m Baịbụl. N’oge na-adịghị anya, m ghọtara na ịmara Jehova na nzube ya dị mkpa karịa mkpụmkpụ m dị. Ihe a m mụtara baara m uru. Abụ Ọma 73:28 bụ amaokwu Baịbụl kacha amasị m. Mmalite amaokwu ahụ sịrị: “Ịbịaru Chineke nso dị m mma.”
Ndị ezinụlọ anyị mechara sí na Kot Devụa kwaga Bokina Faso. Ndụ m wee gbanwee. Mgbe anyị bi na Kot Devụa, ndị mmadụ na-ahụkarị m n’ebe ahụ m na-anọ ere mkpụrụ osisi. Ma, n’ebe ọhụrụ a anyị kwatara, e nweghị onye ma m. Ọtụtụ ndị ahụtụbeghị onye dị́ ka m. Otú ndị mmadụ si ele m anya na-eme m ihere. Ruo ọtụtụ izu, ekweghị m apụta èzí. Ma, m mechara cheta otú ịbịaru Jehova nso si dị m mma. M degaara alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova akwụkwọ, ha ezitere m onye kwesịrị ekwesị, ya bụ, otu nwanna nwaanyị bụ́ onye ozi ala ọzọ aha ya bụ Nani. Ọ na-eji ọgba tum tum abịa.
Ụzọ ndị dị́ n’ebe anyị bi na-amị amị mgbe niile. N’udu mmiri, ebe niile na-abụ apịtị apịtị. Nwanna nwaanyị ahụ na ọgba tum tum ya na-ada ọtụtụ ugboro n’ụzọ ma ọ bịawa ịmụrụ m ihe. Ma, ọ daghị mbà. Ka oge na-aga, ọ gwara m ka o buru m gaa ọmụmụ ihe. Ọ pụtara na m ga-apụ èzí, diwe anya ndị mmadụ ga na-ele m. Ihe ọzọ bụ na ịnọ n’elu ọgba tum tum ahụ ga-eme ka o sikwuoro Nani ike ịgba ya. Ma, m kwetara n’ihi na m chetara ihe nke abụọ amaokwu ahụ kacha amasị m kwuru. Ọ sịrị: “Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ka m ji mere ebe mgbaba.”
Mụ na Nani na-adanye n’apịtị mgbe ụfọdụ. Ma, ọ naghị ewute anyị n’ihi na ọmụmụ ihe dị anyị mkpa. Obi dị m ụtọ na, kama ilewe m ụdị anya ahụ ndị mmadụ na-ele m, ndị nọ́ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ji obiọma nabata m. E mere m baptizim mgbe ọnwa itoolu gara.
Ihe nke atọ e kwuru n’amaokwu Baịbụl ahụ kacha amasị m bụ: “Ka m wee kọsaa ọrụ ya niile.” M matara na ihe ga-akacha esiri m ike bụ ikwusa ozi ọma. M ka na-echeta ụbọchị mbụ m gara ozi ụlọ n’ụlọ. Ụmụaka na ndị toro eto nọ na-ele m, na-eso m ma na-ejije otú m si aga ije. O wutere m. Ma, m nọ na-agwa onwe m na Paradaịs dị ha mkpa otú ọ dịkwa mụnwa. N’ihi ya, ike agwụghị m.
Iji mee ka ihe dịtụrụ m mfe, m zụtara ígwè nwere ụkwụ atọ, nke a na-eji aka anyagharị. É ruo n’ebe a ga-arị ugwu, onye mụ na ya na-arụ n’ozi ọma na-akwara m n’ígwè ahụ rịa ya, ma anyị gbadatawa, ya arịgoro n’elu ya, anyị agbadawa. Ịga ozi ọma siiri m ike ná mmalite. Ma, o mechara tọwa m ezigbo ụtọ, mụ amalite ịsụ ụzọ oge niile n’afọ 1998.
M mụụrụ ọtụtụ ndị Baịbụl, mmadụ anọ n’ime ha mekwara baptizim. Otu n’ime ụmụnne m ndị nwaanyị batakwara n’ọgbakọ. Ọtụtụ mgbe, ịnụ otú ndị ọzọ si na-eme nke ọma n’ọgbakọ na-agba m ume mgbe obi dawara m mbà. Otu ụbọchị, mgbe ịba ji m, m natara akwụkwọ ozi sí Kot Devụa. E nwere otu nwa akwụkwọ nọ́ na mahadum dị́ na Bokina Faso m maliteere ọmụmụ Baịbụl ma nyefee ya otu nwanna nwoke. Nwa akwụkwọ ahụ mechara kwaga Kot Devụa. Obi dị m ezigbo ụtọ mgbe m nụrụ na ọ bụzi onye nkwusa a na-emebeghị baptizim.
Olee otú m si enweta ego m ji egbo mkpa m? Otu òtù na-enyere ndị nwere nkwarụ aka kụziiri m ịkwa ákwà. Otu nwaanyị só ná ndị nkụzi anyị hụrụ otú m si arụsi ọrụ ike ma sị m: “Anyị ga-akụziri gị otú e si eme ncha.” Ha kụziiri m ya. M na-anọ n’ụlọ anyị eme ncha e ji asa ihe. Ncha m na-amasị ọtụtụ ndị. Ha na-agwakwa ndị ọzọ banyere ya. M na-eji ọgba tum tum nwere ụkwụ atọ ebugara ya ndị ahịa m.
N’afọ 2004, o wutere m na m kwụsịrị ịsụ ụzọ n’ihi na ọkpụkpụ azụ na-egbusi m mgbu ike. Ma, m ka na-agachi ozi ọma anya.
Ndị mmadụ na-ekwu na e ji ịmụmụ ọnụ ọchị mara m. Obi na-adị m ụtọ mgbe niile n’ihi na ịbịaru Chineke nso dị m mma.—Akụkọ Sarah Maiga kọrọ.